“Tsy voasolontena ireo tafavoaka velona, tahaka izany koa ireo niharam-boina tsy mivantana tamin’ny fandripaham-behivavy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2018 4:53 GMT
Mpikatroka i Darío Castro, izay nanampy tamin'ny fananganana ny Ivon-toerana ho an'ny Miralenta sy ny Zo (INIGED) ao amin'ny Oniversite Foibe ao Ekoadaoro. Ity manaraka ity dia dika antsoratra tamin'ny lahatsary fanadihadian'i Darío amin'ny zavon-tenin'ny voambolana “feminicidio” (fandripaham-behivavy).
Ireo teny manjaka tamin'ny lahatsoratra nivoaka teo anelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 manonona ny “feminicidio” (lahatsoratra 141) tao amin'ny angona Media Cloud 2 amin'ny seha-mpampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (raha hijery sary lehibe kokoa)
Ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro ity. Nikarakara atrikasa natao tamin'ny 21 Avrily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.